Shikhar Samachar | खप्तडका ४० घोडा खाने मुख्यमन्त्री, वन फँडानी गर्ने वनमन्त्री : सभापति देउवा खप्तडका ४० घोडा खाने मुख्यमन्त्री, वन फँडानी गर्ने वनमन्त्री : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेस डोटीका सभापती प्रदीपकुमार देउवाले देश अपराधी र भ्रष्टहरूको हातमा पुगेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले शनिवार देशका सबै स्थानीय तहमा गरेको विरोध सभा अन्तर्गत डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
‘सरकारको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तीहरूको अनुहार हेरे थाहा हुन्छ ! देशको हबिगत के होला?,’ उनले भने,‘वन फँडानी गर्ने वनमन्त्री ! ब्यक्तीहत्याको अभियोगमा मुद्दा झेलिरहेका सभामुख ! प्रधानमन्त्री स्वयम् व्यक्तीहत्याको आरोप झेलेका व्यक्ती । अनि देश कसरी बन्छ ?’
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि भ्रष्ट पृष्ठभूमिका रहेको उनले दाबी गरे । ‘खप्तडमा ४० गोडा रातारात बाघले खायो भन्नेहरू हाम्रा मुख्यमन्त्री भएका छन,’ सभापती देउवाले भने,‘खप्तडका पाटनहरूमा नेपालगञ्जका खच्चडका खुर छरेर घोडा खाएको सबैलाई थाहा छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना किनबेच पनि भईरहेको उनले दावी गरे । ‘वरिपरी योजनाको बार्गेनिङ गर्ने विचौलियाहरू राखिएका छन । जो योजना बेच्छन, र कमिशन रकम मुख्यमन्त्रीसम्म पु–याउछन । यसरी प्रदेशलाई लुटिरहेका छन,’ उनले थपे ।
प्रतिनिधी सभा दुर्घटनामा पर्नुको कारण पनि कम्युनिष्ट नामका स्वार्थीहरूको झुण्ड रहेको बताए । उनले भने, ‘नेकपा भन्ने शक्ति कहिल्यै जनताको हितका लागि नै थिएन् । यो सत्ता र शक्ती हत्याउन् स्वार्थमा बनेको एक झुण्ड हो । जहाँ भागबण्डा नमिलेपछि अहिले यो अवस्था आयो ।’
कम्युनिष्टहरुको स्वार्थको लडाईले देशको भविष्यमाथि नै प्रहार भएको सभापती देउवाले बताए । ‘कम्युनिष्टहरुले देशलाई कठिन मोडमा पु–याएर अलपत्र पारे,’ उनले भने,‘अब यसको निकासका लागि कांग्रेस जस्तोसुकै परिस्थितीका लागि तयार छ ।’